Boeing 777-200ER 6 ọnwa 1 izu gara aga #1591
Kedu ka m ga - agbanwe faịlụ CFG ụgbọ elu na 777 iji tinye ụzọ ọzọ, imeghe na mmechi.
M na-ejikwa GSX FSDT ma ọ na-enye nhọrọ nri nri, nke na-egosi ite ụgbọ mmiri na-adọkpụ n'ọdụ ụgbọ elu ma jiri ọnụ ụzọ mberede n'akụkụ aka nri nke ụgbọ elu ahụ iji bute nri. A ga-emeghe ụzọ. Emezighi 777 maka ibo 5, naanị 4. Agụnyere m ọnụ ụzọ nke ise na faịlụ CFG, mana ọ nweghị ihe gbanwere. Mgbanwe a ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụ otu a, kedu. Ndụmọdụ ọ bụla na-enwe ekele dị ukwuu.
Boeing 777-200ER Download 5 ọnwa 3 izu gara aga #1615
M ebudatara ngwugwu 777 Ultimate na kọmputa m ma wepụta faịlụ zip wee wụnye nke ahụ FSX Ntan Steam. Plagbọ elu anaghị egosi na nke m FSX mmemme. Enwere m faịlụ 777 na folda Steam mana ọ nweghị onye nọ FSX folder.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Yuri-martins19
Boeing 777-200ER 5 ọnwa 2 ụbọchị ago #1630
Agbalịrị m ịgbagharị ụgbọelu n'oge na-adịbeghị anya na mgbakwunye autopilot na m naanị ịchọpụta na autopilot ahụ adịghị ka ọ na-ekwu na njikọta. Ọbụna na ngwanrọ autopilot m na-eji m igbe autopilot yana atụmatụ atụmatụ igbe na-akpaghị aka. Nke a ọ bụ ahụhụ na fọdụlọn fileffg ma ọ bụrụ na ọ bụ etu a ka m ga - esi dozie ya ka ụgbọelu a wee fegharịa dị ka o kwesiri. Ugbu a, a ga m arutu aka na agbagola ụgbọ elu ndị ọzọ ebudatara m na-abụkarị mgbe ị meriri nna ukwu autopilot na-agbachi nkịtị mgbe ụda autopilot na ụda na - akpali dị ka a ga - atụ anya ya mgbe autopilot ahụ kwụsịrị.
Boeing 777-200ER 5 ọnwa 1 ụbọchị ago #1632
ọ nwekwara ntọala mmeghari mmanụ na-ezighi ezi ka Boeing 777-200ER nwere ike fega ruo ~ 13000 nm na mmanụ zuru oke, nke na-emebi eziokwu ma ọlị.
Ọnụ ụzọ Bromel maka Boeing 777-200ER 4 ọnwa 3 izu gara aga #1638
Site na ahụmịhe nkeonwe m enweghị ike ịme ya n'ihi na etinyere ya na ihe nlereanya, (faịlụ mdl). Naanị onye mepụtara ihe nlereanya ahụ nwere ike idezigharị ụgbọ elu ahụ. M na-atụ aro ịkpọtụrụ ya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ndumodu ikpe azu: site Captain747. Ihe kpatara: Emezighi isiokwu okwu
Ọnụ ụzọ Bromel maka Boeing 777-200ER 4 ọnwa 3 izu gara aga #1639
Daalụ maka aro ahụ. Agbalịrị m ịchọta onye mepụtara ụgbọ elu ahụ na enweghị chi ọbụla. Nwere ike ịtụ aro ebe m nwere ike ịhụ ya.
Ọnụ ụzọ Bromel maka Boeing 777-200ER 4 ọnwa 3 izu gara aga #1640
Ndewo Bromel, Ihe m mere bụ ịwụnye POSKY Boeing 777-200LR. Site na usoro a, enwere m ike ịhazi Air.File iji mepụta nhazi ụgbọ elu zuru oke. Na mbu achọtara m ka ụgbọelu ahụ na-arị, ọ tụfuo, ọ na-achọ ịbanye n'okporo ụlọ na 1500ft p / m. Ugbu a, ọ nwere ike ịrị elu na 2000ft p / m na-enweghị ida. Etinyekwara m ihe Pky_utility, yabụ ugbu a enwere m ibo ụzọ ise na nnukwu ụgbọ mmiri na ebu. Edozigharị m steepụ m na nnukwu ụgbọ mmiri iji dabara ụgbọ elu m (EL AL).
Ọnụ ụzọ Bromel maka Boeing 777-200ER 4 ọnwa 3 izu gara aga #1641
Daalụ maka azịza ya, nke ahụ na-ada ka ihe m na-achọ.
Kedu ihe bụ PKY -ility na ebe m ga-ahụ ya.
Daalụ ọzọ maka enyemaka gị.
Ọnụ ụzọ Bromel maka Boeing 777-200ER 4 ọnwa 3 izu gara aga #1642
POSKY adịkwaghị dị mwute ikwu. Ọ ga-amasị m iziga gị nlele, mana ọ dị 7.8mb ma buru oke ibu ime ya ebe a. Ana m eche ma m nwere ike ibugo na saịtị Rikoooo ma ọ bụrụ na ha ga-anabata ya?
Ọnụ ụzọ Bromel maka Boeing 777-200ER 4 ọnwa 3 izu gara aga #1643
Naanị pịa njikọ a simviation.com/1/download-file?file=B772 ...FSX.zip & fileId = 56118 ma obu tinye ya n’ime ihe nchọgharị gi. Enwere m olileanya na agaghị m abanye na nsogbu maka nke a.
Oge ike page: 0.548 sekọnd